जग्गा किनबेच गर्न अब सेयरकै झल्को दिने गरी ‘ल्यान्ड मार्केट’ सञ्चालन - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
जग्गा किनबेच गर्न अब सेयरकै झल्को दिने गरी ‘ल्यान्ड मार्केट’ सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन ९ : सरकारले जग्गा–जमिन कारोबारका लागि सेयर कारोबार जस्तै भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा सेयर कारोबार भए जस्तै ‘ल्यान्ड मार्केट’ मा जमिनको कारोबार हुने गरी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
यसको लागि मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
उनले भने, ‘ल्यान्ड मार्केट’ का लागि हामीले आन्तरिकरुपमा अध्ययन गरेका छौं । अबको एक साता भित्रै प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउनेछ ।’ उनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि सरोकावाला निकायसँग आवश्यक थप छलफल गर्ने बताए ।
प्रवक्ता जोशीले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाएर पूर्णपाठको प्रतिवेदन ल्याउँछौं । यसका लागि करिब १ देखि डेढ महिना समय लाग्छ ।’
उनले पहिलो चरणमा भूमि खरिदबिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भूमि बजार आवश्यक रहेको औंल्याइएकाले त्यसतर्फ पनि अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘जग्गा खरिद बिक्रीका लागि आधिकारिक संस्था खडा गरी सो मार्फत खरिदबिक्री हुने अवस्था सिर्जना गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारण ल्याउन लागिएको हो’ प्रवक्ता जोशीले भने । तथापि, भूमि बजार सरकारी स्वामित्वको हुने वा निजी स्वमित्वको हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलमा छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।
जोशीका अनुसार सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षभित्रै ल्यान्ड मार्केट कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया के हुने, पुँजी कति चाहिनेजस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बन्नेछ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘ल्यान्ड मार्केट’को अवधारणा अघि सारको थियो । भने, यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसले निरन्तरता पाएको थियो ।
किन आयो ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा ?
घरजग्गा खरिद बिक्रीमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएपछि त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाई छ । जोशीले भने, ‘किनबेच गर्ने निश्चत भएपछि पास गर्न मालपोतमा जाने भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
तर, किनबेच गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’ दलालीमार्फत खरिद गर्दा ठगिने सम्भावना पनि उतिकै रहेको उनले बताए ।
त्यसैले अनुमति प्राप्त संस्था स्थापना गनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका कारण ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा आएको उनले बताए । त्यसो त विकसित मुलुकहरुमा पनि यस्ता अभ्यास प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । अहिले हामीकहाँ जग्गा कारोबारका लागि अत्याधिक नाफा लिन खोज्ने दलालीको हाबी छ । जुन अनौपचारिक पनि हो ।
मन्त्रालयलका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्दा ठगिने, नक्कली जग्गा खडा गरी पुर्जा दिने जस्ता प्रवृत्तिलाई न्यून गर्छ । यदि मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्दा पनि ठगियो भने सरकारले आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ । कारवाही गर्न सक्छ ।
कसरी हुन्छ ल्यान्ड मार्केटमा जग्गाको किनबेच ?
जोशीका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जसरी कम्पनीहरु सूचीकृत भएपछि सेयर कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी ल्यान्ड मार्केटमा पनि बिक्री गर्न चाहने जग्गाको सूचीकरण हुन्छ र किन्न चाहनेले सोही मार्केटमा किन्न सक्छन् । यसको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले जग्गा खरिदबिक्री गर्न चाहनेलाई अनलाइनमार्फत खरिदबिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ । यदि कसैलाई जग्गा बिक्री गर्नुपरेमा आफ्नो जग्गाको विस्तृत विवरण सो वेबसाइटमा राख्ने र खरिद गर्नेले सोही वेबसाइटमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता जोशीले बताए ।
साना उद्योगलाई ऋणमा प्राथमिकता
ग्वार्को तरकारी बजारमा ‘क्यूआर’ कोड सेवा सुरु